ကြိုးတစ်လုံးဂါဝန်လေး နဲ့ အသည်းယားစရာ ကောင်းလောက်အောင် ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်းနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ် – Let Pan Daily
ကြိုးတစ်လုံးဂါဝန်လေး နဲ့ အသည်းယားစရာ ကောင်းလောက်အောင် ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်းနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ်
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေး နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူလေး ကတော့သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူ​အရာလေးတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေကို အသည်းယားစေတာပါ။ သူမဟာ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရာမှတဆင့် အောင်မြင်မှုတွေ များစွာရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေလေးဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများတွင်လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ ဟာလည်း တစ်ကားထက်တစ်ကား ပိုမိုပီပြင်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက စောင့်ကြည့်အားပေးနေပြီး ယနေ့မှာတော့ သူမက လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်လည်း ပုံလေးတွေ တင်ထား လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်အချစ်တော်မလေး မေမြင့်မိုရ်က သာယာ လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေကို နောက်ခံထားကာ အသည်းယားစရာ ကောင်းလောက်အောင် ပိုစ့်ပေးဓါတ်ဖမ်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာပါ။ မေမြင့်မိုရ် ရဲ့ ပုံလေးတွေတိုင်းက ကြည့်မိသူတိုင်းကို အချစ်ပိုမိစေမှာ အသေအချာပဲမို့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်. ။ ပရိသတ်တွေကလည်း ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေး ခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက် ပါနဲ့နော်…. ။
Source & Photo credit – May Myint Mo’s FB page
မိမိုကျလှနျး တဲ့ ဖကျရှငျလေး နဲ့ ရငျဖိုစရာ ကောငျးလှနျး နတေဲ့ မရေတီဇျော
ကမ်ဘာ့ အလှဆုံးအယောကျ (၁၀၀) ရဲ့ ဆနျခါတငျ စာရငျးမှာ ပါဝငျလာ ခဲ့တဲ့ မမွေငျ့မိုရျ
ပွီးပွညျ့စုံပွီး သူမတူတဲ့ အလှတရားတှေ နဲ့ မွငျသူတိုငျး ကို ရငျခုနျသှား စလေောကျတဲ့ ရှငျယှနျးမွတျ
ဆကျဆီကလြှနျးတဲ့ အတှငျးသားပျေါလှငျအောငျ ရိုကျထားပွီး ရငျဖိုစရာကောငျးလှနျး တဲ့ ရှငျယှနျးမွတျရဲ့ ဗီဒီယို